Maraykanka iyo Somaliland oo Heshiis Wada gelaaya. | Hargeysa World~Herald
Maraykanka iyo Somaliland oo Heshiis Wada gelaaya.
UncategorizedMaraykanka iyo Somaliland oo Heshiis Wada gelaaya.
Dawladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa in ay Somaliland la gasho heshiis dhanka amniga ah oo ka gaar ah ka ay kula jirto Dawladda Soomaaliya, sida ay sheegayso warbixin uu soo saarey Aqalka Congress-ka Mareykanka November-4-2021.
Arrintan ayaa timid kadib markii Senator James Risch uu soo jeediyay in wax ka baddal lagu sameeyo ‘Xeerka Difaaca Qaranka’ dawladda Mareykanka. Sidoo kale warbixinta Congress-ka waxa lagu sheegay in la sameeyo baadhitaan xaqiiq-raadin ah oo la xidhiidha iskaashiga dhanka amniga iyo difaaca ee Somaliland iyo Mareykanka. Waxaana xusid mudan in hadda Somaliland ay ku sugan yihiin xubno ka socda shaqaalaha Congress-ka Mareykanka.
Maraykanku waxa kale oo uu bogaadiyay xidhiidhka dhanka amniga iyo difaaca ee Somaliland iyo Taiwan. Isla warbixintan, Congress-ka Maraykanka ayaa Somaliland ku ammaanay in ay ka aqbashay codsigiisii la xidhiidhay caawimaadda iyo daadguraynta muwaadiniinta Mareykanka iyo dadka jilicsan ee reer Afghanistan ee ku sugnaa dalka Afghanistan wakhtigii ay Daalibaan qabsatay halkaasi.